မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2018-01 > အားလုံးအဘို့ကောင်းသောသတင်းများ
Paulus schreibt im Römerbrief: «Liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden» (Römer 10,1 NGÜ)။
Aber es gab ein Problem: «Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht; das kann ich bezeugen. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht, und versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen» (Römer 10,2-3 NGÜ)။
ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ်ခါတစ်ရံဥပဒေများအောက်တွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကအမေ့ရဲ့ဥပဒေတွေအောက်မှာကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့တယ်။ ခြံထဲတွင်ကစားပြီးနောက်သူတို့၏စည်းမျဉ်းများထဲမှတစ်ခုမှာတိုက်ခန်းထဲသို့မဝင်မီကျွန်ုပ်၏ဖိနပ်ကိုချွတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ပတ်ပေရေနေသောဖိနပ်များကိုမုတ်ပေါ်၌ရေဖြည့်ရသည်။
ဘုရားသခင်ကသူနဲ့မတူဘူး သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များဖုန်များသူ့အိမ်တစ်အိမ်လုံးကိုပျံ့နှံ့စေလိုသည်။ ပြနာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့နည်းလမ်းမရှိဘူး၊ သန့်ရှင်းတဲ့အထိမဝင်နိုင်ဘူး။ ဘုရားသခင်သည်သူ၏အိမ်ထဲသို့သန့်ရှင်းသူ၊ ဘယ်သူမှဒီသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မှတဆင့်မရနိုင်ပါ။
ဒါကြောင့်ယေရှုကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့သူ့အိမ်ကနေထွက်ခဲ့ရတယ်။ သူသာလျှင်ငါတို့ကိုသန့်ရှင်းစေနိုင်၏။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖုန်ကိုဖယ်ရှားရန်အလုပ်များနေပါကနောက်ဆုံးသောနေ့တိုင်အောင်သင်ကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းနိုင်သည်။ အိမ်ထဲဝင်ရန်မလုံလောက်ပါ။ သို့သော်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသောစကားကိုယုံလျှင်သင့်အားသန့်ရှင်းစေပြီး ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သို့ ဝင်၍ စားပွဲတွင်ထိုင်။ ညစာစားရန်ဖြစ်သည်။
ရောမ ၁၀ ရှိအခန်းငယ် ၅ မှ ၁၅ တွင်အောက်ပါအချက်ကိုဖော်ပြထားသည် - အပြစ်တရားကိုမဖယ်ရှားလျှင်ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်အကြောင်းသိခြင်းကကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကိုမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။
အသွေးအသားနှင့်တကွ၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်တည်းဟူသောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည်ငါတို့ထံသို့ ရောက်၍၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ငါတို့သည်သူ့ကိုရှာ။ မတွေ့နိုင်ကြ။ သူသည်ဘုရားသခင့်လွတ်လပ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆင်းလာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ယေရှုသည်လူတို့၏အပြစ်များကိုဆေးကြော။ ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သို့လာရန်လမ်းဖွင့်ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့သည်။
ဒါကမေးခွန်းထုတ်စရာပါ။ ဘုရားသခင်ပြောတာကိုသင်ယုံပါသလား။ ယေရှုသည်သင့်ကိုတွေ့ပြီ ဖြစ်၍ သင်၏အိမ်ထဲသို့ယခု ဝင်၍ သင်၏အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောပြီးပြီဟုထင်ကြသလော။ ၎င်းကိုသင်မယုံလျှင်သင်သည်ဘုရားသခင့်အိမ်တော်အပြင်ဘက်တွင်ရှိနေပြီးမဝင်ရပါ။
၎င်းမှာအမှန်တရားပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုဆေးကြော။ အကူအညီမပါဘဲသန့်ရှင်းစေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးသူသည်သခင်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအဖြစ်မှန်တွင်နေထိုင်လျက်ရှိကြသည်။
ဘုရားသခင်က ၀ န်ခံခြင်းကိုမမျှော်လင့်ပါ
စာချုပ်တစ်ခုနှင့်ဝန်ခံချက်အကြားခြားနားချက်ကိုနားလည်ရန်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ကစာချုပ်တစ်ခုလဲလှယ်ဖြစ်သည့်အတွက်တရားဝင်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီတစ်ခုစီသည်အခြားအရာတစ်ခုခုအတွက်တစ်ခုခုဖလှယ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ပcontractိညာဉ်ပြုပါကယေရှုအားသစ္စာကတိပြုခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မတောင်းဆိုနိုင်ပါ။ ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း။ ခရစ်တော်၏လွတ်လပ်မှုသည်ငါတို့ထံသို့ဆင်းသက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပွင့်လင်းသောတရားရုံးတစ်ခုတွင်လူတစ် ဦး သည်ဤအချက်ကိုတည်ရှိကြောင်းဝန်ခံသည်။ ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သူတစ် ဦး ကဤသို့ပြောနိုင်သည် -“ ပစ္စည်းတွေခိုးတယ်ဆိုတာကိုငါဝန်ခံတယ်။ သူသည်သူ့ဘဝတွင်အဖြစ်မှန်ကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ယေရှု၏နောက်လိုက်တစ် ဦး ကဤသို့ဆိုထားသည် -“ ကျွန်ုပ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်ဝန်ခံသည်။
၁၈၆၅ တွင်တက္ကဆက်ပြည်နယ်တွင်ကျေးကျွန်များလိုအပ်သည်မှာသူတို့၏လွတ်လပ်မှုကိုဝယ်ယူရန်စာချုပ်မဟုတ်ပါ။ သူတို့လွတ်မြောက်ပြီဆိုတာကိုသိပြီးဝန်ခံရတယ်။ မင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုထူထောင်ပြီးပြီ။ သမ္မတလင်ကွန်းကသူမကိုလွှတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးသူမမှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးသား၏ဘဝအသက်တာအားဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့သည်။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရှိကျေးကျွန်များလိုအပ်သည်မှာသူတို့၏လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကြားသိရန်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်တွေဟာတစ်ယောက်ယောက်ကိုလာပြီးသူတို့လွတ်ပြီလို့ပြောဖို့လိုတယ်။
ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းအစီအစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကဏ္isမှာအဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းသံတမန်များဖြစ်ကြပြီးသူတို့၏လွတ်လပ်မှုအကြောင်းတစ်ခါမျှမကြားဖူးသောသူများအားလွတ်လပ်မှုသတင်းကောင်းကိုသယ်ဆောင်သည်။ လူတစ်ယောက်ကိုမကယ်တင်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းများ၊ သတင်းကောင်း၏ကျောက်ဆူးများဖြစ်ကြပြီးသတင်းကောင်းကိုယူဆောင်လာသည်။
heardသရေလလူတွေကပေါလုသိတယ်။ ပေါလုပြောသောစကားကိုသူတို့သည်မယုံကြ။ မင်းရဲ့ကျွန်ဘဝကနေလွတ်မြောက်မှုကိုယုံကြည်ပြီးလွတ်လပ်မှုအသစ်မှာနေသလား။
ယောနသန်သည် Stepp အားဖွငျ့ဖွစျသညျ